"Ọtụtụ mgbe arịa ọrịa oyi. ihe na-eme?"Azịza ya bụ,!
ị bụ ebe a: Home Atụmatụ "Ọtụtụ mgbe arịa ọrịa oyi. ihe na-eme?"Azịza ya bụ,!
Site na nwata anyị niile mara n'ụzọ zuru okè wetara oyi mgbaàmà: prostration, okpomọkụ, oyi, ụkwara, igbu mgbu ọkpụkpụ na ndị ọzọ na ndị dị otú ahụ "emere ọtụmọkpọ". Ndị okenye na-emekarị na-arịa ọrịa obere mgbe, karịa ụmụaka, ma ị pụghị ikwu, na ọ bụ mfe iji chebe megide nkịtị oyi nje virus na-efe efe.
Taa, anyị ga-ekwu banyere, otú iji gbochie mmalite nloghachi nke ọrịa mgbe na-abịa na dị nnọọ na-agwọ. Nsogbu - ihe wetara akụkụ nke nkịtị oyi, n'ihi na ha nwere ike ịkpasu a na-akawanye njọ nke-adịghị ala ala ka ọrịa, na-eduga mmepe nke ọhụrụ enweghị nchịkwa ndị viscera. Na mgbochi na ọgwụgwọ nke oyi ma flu chiayte isiokwu na anyị na saịtị – http://forcys.ru/article/chastye_prostudy_u_vzroslyh-74/.
otú, ihe ize ndụ nke inweta nsogbu na ọrịa nlọghachite bụ elu, ma ọ bụrụ na:
mgbe ọrịa e belata okpomọkụ - a ịrịba ama nke ojuju nke ahu ihe nchebe na ọgụ;
ị na-arịa ọrịa n'ihi na ogologo 7-10 ụbọchị, na ndozi-adịru nwa oge;
Ọ pụtara iku ume ọkụ ọkụ;
ụkwara amalite arịọsikwa.
Ọ bụrụ na usoro ị na-eji agwọ ọrịa na-adịghị pụtara ha uru na omume,, ị ga-akpa gaa na nke dọkịta. Ma eleghị anya,, ma ọ bụ na ihe banyere adighi ike ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị preparations, na-ezighị ezi ọgwụgwọ regimens, ma ọ bụ ndị miri nsogbu ahụ gị.
dee, iche echiche ahụ na-nwere a nnọọ nnukwu mmetụta na mgbake ọsọ. The ọzọ pessimistic gị nke dị n'ime mmụọ, adịghị ike karị gị na dịghịzi usoro. Ọzọkwa, ahụ ha kwesịrị ezu ike nke ọma, ma ebe ọ ga-ewe ike na-echebe megide-efe efe na ịga nke ọma ọrụ?
Nsogbu nke oyi nwere ike ịbụ otitis, Sinusitis, bronchitis, oyi baa, na ọgwụgwọ nke ọ bụla n'ime ndị a na ọnọdụ nwere ike ịchọ ihe ike, karịa ilekọta banyere ha ike na iji gbochie mmepe nke nsogbu.
Ọ bụrụ na okwu a "nke ukwuu mgbe arịa ọrịa oyi, ihe na-eme - na-amaghị "banyere gị, oké njọ ihe mmadụ kwesịrị ime ozugbo iji ọgụ oyi. Nke a ga-enyere ọgwụ ọhụrụ Fortsis - lozenges na-irè polyphenol mgbagwoju.
Ndị bekee na-kpuchiri nje na nje bacteria, adịghị ekwe ka ha ịga na na, -egbochi n'ihu progression nke ọrịa. Ọ bụ ya mere irè Fortsis, tụnyere ọtụtụ ahịa ọgwụ ọgwụ ọjọọ, nnọọ elu.
Fortsis enyere gị aka ichebe onwe gị na ndị ha hụrụ n'anya si oyi n'oge oge na-enye ume iji akụkụ na ngwa ngwa ọrịa, ọ bụrụ na ọrịa e nwechaalarị. Fortsis - a oge a na ọgwụ ndị, onye chọrọ ịdị ndụ na-enweghị oyi!